XISBIGA MIDNIMO-QARAN OO XUSAY SANAD GUURADIISII SEDDEXAAD – Balcad.com Teyteyleey
XISBIGA MIDNIMO-QARAN OO XUSAY SANAD GUURADIISII SEDDEXAAD
Guuradii Seddexaad ee Aasaaskii XISBIGA MIDNIMO-QARAN oo la dhisay 26 Feberaayo 2014 ayaa lagu qabtay Hotel maka Al Mukarama ee Muqdisho, Waxaa soo qayb galay Munaasabdaas Xildhibaanno , Madaxda Xisbiyada Dalka ka jira, Siyaasiyiin, Waxgarad, Dhallinyaro, Haween iyo Marti Sharaf kale.
Ugu horeyn waxaa hadlay G/Xigeenka 1aad ee Xisbiga Midnimada Qaranka Md. Ibraahin Saalax Dayfulaahi wuxuu ku dheeraaday Taariikhdii iyo marxaladihii uu soo maray XISBIGA MIDNIMO-QARAN isagoo sheegay inuu dhowaan uu u qabsoomay Shirweynihii Seddexaad ee Golaha Dhexe waxaana laysku af gartay in wax laga bedelo Dastuurka Xisbiga.
Xubnihii kale ee halkaasi hadlay waxaa ka mid ahaa Gudoomiyaha Xisbiga C/risaaq Waaberi waxaana uu yiri “ Dalka Soomaaliya xilligani dadka u badani waa Dhallinyaro waxaana uu Xisbiga Midnimada Qaranka diyaar u yahay in Dhallinyaradaasi oo la baro waxa la yiraahdo Dowladnimada maadaaama ay ku bar baareen Dowlad la’aan iyo Fowdo isagoo ballan qaaday in Laamo laga furi doono Gobolada dalka oo dhan.
Waxaa kale halkaasi ka hadlay Gudoomiyaha Xisbiga Cadaaladda Bulshada Md. Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan) waxaana uu aad ugu mahad celiyay dadkii soo qaban qaabiyay xafladaasi waxaa intaasi raaciyay “Dalka Soomaaliya doorasho waa ka dhici kartay sanadkii 2016kii hase yeeshee marnaba aqbali mayno in dib ku dhac ku yimaaado doorashada la qaban doono sanadka 2020, wuxuuna yiri:
“Waa in Xisbiyada Waddanka ka jira ay dadaal dheeraad u galaan sidii awooda shacabka loogu celin alhaa, si loo helo Doorasho Madax Banaan, loogana gudbi lahaa Hanaanka 4.5 kaasi oo dib u dhac ku keenay Soomaaliya.
Si gaar ah ayuu Md. Tarsan dowlada Soomaaliya ugu soo jeediyay in gabi ahaanba la joojiyo Dilka Toogashada maadaama Garsoorka hadda jira aysan aqoon fiican u lahayn go’aankaasi.
Waxaa iyagana halkaasi ka hadlay Xildhibaanada kala ah Md. Shariif Maxamed Cabdullaahi, Prof Maxamed Cumar Dalxa, Marwo Fowsiyo Yusuf Xaaji Aadan iyo Santerad Sam Sam Daahir waxayna dhammaantood sheegeen in magaca uu wato XISBIGA MIDNIMO-QARAN uu yahay mid isu keeni kara bulshadda Soomaaliyeed.
Waxaa halkaasi hadal qiiro leh ka jeedisay Gudoomiyaha Ururka Qaranka Haweenka Soomaaliyeed Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo halkaasi ka tirisay Gabay uu hore u tiriyay Abwaan Soomaaliyeed oo ujeedadiisu ahayd faa’iidada iyo wanaaga Midnimada waxayna ku baaqday in bulshada Soomaaliyeed ay ka mid noqdaan Xisbiga Midnimada Qaranka.
Ugu danbayntii waxaa halkaasi ka akhriyay War Murtiyeed iyo Baaq Xoghayaha Guud ee Xisbiga Midnimada Qaranka Md. Salaad Xasan Cali wuxuuna u qornaa sidaan:-
Waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho 4-13 Luulyo, 2017, shirka Golaha Dhexe (GDH) ee Xisbiga Midnimoqaran. Shirkaas oo ay kasoo qaybgaleen xubnaha GDH oo ka kala yimiday dhamaan dawlad-goboleedyada dalka iyo qurbajoogta. Ugu horeyntii, waxaa la dhegaystay warbixinta gudoomiyaha xisbiga Mudane Cabdirisaq Waaberi ee xaaladda dalku maaraayo dhanka siyaasadda, amniga, dhaqaalaha iyo abaaraha. Waxaa kale oo la dhegaystay, lagana dooday hawl-qabadkii xisbiga laga soo bilaabo asaaskiisa 26kii Feberaayo, 2014. Dibadeed, waxaa la balaariyay GDH iyo Gudiga Fulinta (GF), waxaana dib loo doortay gudoomiyihii hore Mudane Cabdirisaq Waaberi. Waxaa kale oo la ansixiyay xubnaha GF sida sedexda gudoomiye-xigeen, xoghayaha guud iyo wakiiladda dawlad-goboleedyada, iyo tiro xafiisya ah iyo garabyada dhalinyarada iyo haweenka.
Shirka GDH wuxuu ka dooday qorshaha xisbiga marxaladda soo socota ee loo guurayo doorashada dadweynaha iyo dimoqaraadiyeenta dalka. Waxaa aad loo lafaguray hawlaha muhiimka ah sida diyaarinta diiwaangelinta rasmiga ah ee xisbiga, baahinta hawlaha xisbiga ee gobollada dalka iyo dibadda, tababarada xubnaha xisbiga, kor-uqaadidda wacyigelinta bulshada iyo xoojinta xiriirka xisbiyada dalka. Waxaa kale oo la tilmaamay sidii xisbiga ay ugu soo biiri lahaayeen xubnaha labada aqal iyo xildhibaanadii hore. Waxaa mudnaan gaar ah loo arkay doorka dhallinyarada iyo haweenka ayada oo lagu soo kordhiyay GF garabyada dhalinyarada iyo haweenka.
Shirka GDH oo kusoo beegmay marxalad adag ee dalku maraayo, wuxuu kusoo dhamaaday guul. Xisbigu wuxuu bogaadin u dirayaa madaxweyne Maxamad Cabdullahi Farmaajo, Ra’isul-wasaare Xassan Cali Kheyre iyo Golaha Wasiirada maqaaqiftooda ku aadan la dagalanka musuqmaasuqa xasinlinta dalka sidoo kale wuxuu Tagegaraya mawqifka dhexdhexaadnimada ah ee ay ka qaaten arimaha khilaafka ka dhexeeya walaaha khalajiika Carabta
Waxaa kale oo xibigu ku baaqayaa dedejinta hawlaha dimoqaraadiyeenta dalka, dib-u-heshiisiinta, dhismaha hay’adaha dawlada, iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Wuxuu kale uu ku baaqayaa adkeynta midnimada dalka iyo dadka, kobcinta wada-tashiga mas’uuliyiinta iyo siyaasiyiinta qaranka si wada-jir loogu wajaho marxaladda adag ee dalku maraayo.
Ugu dambeyntii, shirku wuxuu go’aamiyay in shirweynaha xisbiga ee socda la qabto bisha Luulyo, 2018, waxaana lagu boogaadiyay guddiyada kala duwan ee xisbiga iney dardargeliyaan fulinta qorshaha xisbiga.
Ugu dambeyn intii xalfada socotaya halkaasi Gabay Guubaabo ah ka jeediyay Abwaan Xasan Guulwade Xaflada Xuska Sanad Guurada Seddexaad ee XISBIGA MIDNIMO-QARAN waxay ku soo gaba gabowday jawi farxad leh.
The post XISBIGA MIDNIMO-QARAN OO XUSAY SANAD GUURADIISII SEDDEXAAD appeared first on Ilwareed Online.
Nin si xun u dilay Mukulaal oo xukun adag lagu riday iyo Warbaahinta oo hadal heysa (Daawo Sawirada)
Wararki ugu Danbeeyey Dalka Qatar Sucuudiga & Madaxweynaha Turkiga oo Balanqaaday… Daawo